Panasonic Face‑Hair Ionizer EH-SA42 | Buy online | SHOP.COM.MM
Panasonic Face‑Hair Ionizer EH-SA42
တစ်ခါဖွင့်လျှင် ၈ နာရီကြာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
ဆိုင်မှာအမြဲသွားပေါင်းတင်စရာမလိုဘဲ အိမ်မှာဘဲ ကိုယ့်အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းလို့ရလို့သဘောကျတယ် Read more Hide
Panasonic - Face‑Hair Ionizer
Excellent steamer. Can save time and money. :-) Read more Hide
ဆံသားပျော့ပျောင်းချင်လို့ ဆံပင်ကို နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်တော့ အမြဲပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆို ဆိုင်မှာသွားပေါင်းရတာ အခု panasonic ရဲ့ ရေနွေးငွေ့သုံးပေါင်းတင်စက်နဲ့ အိမ်မှာဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းလို့ရသွားပါပြီ။ Read more Hide
Specifications of Face‑Hair Ionizer EH-SA42